Ogaden News Agency (ONA) – Gabre Waa Al Capone-hii Somalia
Gabre Waa Al Capone-hii Somalia
Posted by ONA Admin	/ December 11, 2014
Ninka lagu magacaabo Al Capone wuxuu kasoo dhex baxay Mafia-yadii Mareykanka ee 1920yadii, gaar ahaan markuu soo baxay xukunkii loo yaqiinay (The Prohibition) ee Mareykanka uu ku joojiyay in lagu sameeyo oo lagu iibiyo dalka Amerika Khamriga. Waxaa soo baxay waqtigaa kooxo Gangs ah oo bilaabay inay si sharcidarra ah ku sameeyaan ka dibna ku iibiyaan khamriga. Kooxahii oo dhexdooda dagaalamay ayuu ninkan lagu magacaabo Al Capone kasoo dhex baxay inkastoo ay da’diisu yareyd, hadana wuxuu noqday nin naxariisdarro ku caan baxay oo wada laayay kooxihii la tartamayay. Odhaahyo badan ayaa laga hayaa oo uu kamid tahay odhaahda caanka u noqotay ee dhahaysa; Wax badan ood ku heli kartid hadal macaan iyo qori, kuma heli kartid hadal macaan oo kali ah (You can get much farther with a kind word and a gun than you can with a kind word alone).
Markasta oon arko sawirka Gabre iyo siduu u muujinayo bostoolada shaadhka korkiisa saaran, waxaan soo xasuustaa hadalkaa uu yidhi Al Capone. Shakina igagama jiro inuu Gabree uu ku shaqaynayo odhaahdaa.
Waxaan akhriyay maqaalka uu qoray Bashir M. Xirsi ee shabakadaha arimaha Somaliya wax ka qora ay faafiyeen oo Hooyo Somaliyeed oo magaceeda uu ku sheegay Ayeeyo Gobaad ay ku leedahay siyaasiyiin Somaliyeed oo kasoo noqday shirkii dhawaan Somalida loogu qabtay Denmark- Gacantaad Gabre ku salaantay hakaa Go’do – . Waxaa iyada hubaal ah siduu ninkii Al Capone uga soo dhex baxay hor-joogayaashii Mafia-yada ee tartanka kula jiray, inuu ninkan Gabre la yidhaahdo uga soo dhex baxay dagaal-oogayaashii Somaliyeed oy ku jiraan kuwa hadda maamulada sheeganaya oo qudhooda ka mid ahaa garabyadii ku dagaalamayay Somaliya oo aan kala atkaanin. Hadaba Gabre wuxuu noqday midka ay Mafia-da u yaqaanaan Godfather ama (Madaxa Madaxda), oo ah midka kala haga horjoogayaasha kala duwan ee Mafia-da markay isku qabsadaan danaha ay kala leeyihiin (Suuqa madow). Maadaama uu Gabre ogyahay masuuliyada saaran iyo waxa ka jira Somaliya iyo ujeedada ay ka leedahay xukuumadiisa, waa inuu ku dhaqmaa hal-ku dhigaa Al Capone ee ah Bastoolada inuu banaanka usoo saaro say u arkaan Mafia-da kale.
Gabre wuxuu aaminsiiyay siyaasiyiintii Somalida inuusan Somaliya waxba ka noqon karin hadaanu isaga soo marin oo aanu siinin ogolaanshaha. Qaar badan ayaa kaararkii ay ku lahaayeen bulshadooda ku waayay raaligalinta Gabre iyo Itobiya, isla markaana aan waxba ka helin oo weli ku jira liiska sugitaanka (waiting list) oo maqaayadaha Xamar fadhiya oo sugaya inuu mar un soo dhowro Gabre. Qaar aan laga filaynin, sida CabdiCasiis Xildhibaan, oo Somalida ay ku waday inay yihiin damiirka umadda Somaliyeed ayaa ku bariiqday shirkii Denmark loogu qabtay Somalida oo lagu sawiray iyagoo raaligalinaya Gabre, waana sababta ay Ayeyo Gobaad u tidhi Ha’idinka Go’do Gacantaad ku salaanteen Gabre.
Shaqsiga kali ah ee fahmay Gabre iyo siduu u shaqeeyo oon weli u dhuumanin Gabre waa Amin Camir (AminArts) iyo JWXO.